शितल डेरीका सफल उद्योगी अहिलेका अवस्थामा हाम्रो बिजनेश हो प्रेम श्रीस – Enayanepal.com
शितल डेरीका सफल उद्योगी अहिलेका अवस्थामा हाम्रो बिजनेश हो प्रेम श्रीस
२०७३, ६ पुष बुधबार मा प्रकाशित
 के छ खबर ?
एकदम ठीक छ नि हजुर ।
 आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिलेका अवस्थामा हाम्रो बिजनेश हो व्यापारमा डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न व्यस्त छु । यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने योजना गराइराखेको छु ।
 कलेजमा पढ्दा कस्ता केटीहरू मन पथ्र्याे नि ?
कलेजमा मैले खासै केटीहरु देख्न पाएन । भेरी–बबई क्याम्पस तुल्सीपुरमा पढ्थे । मैले त्यहा केटीहरु देख्नै पाएकै थिइन । केटीहरु थिए भने मनपर्ने केटिहरु भईदिएको भए एकदमै डिप्ली जाने अध्ययनमा पनि ध्यान दिने केटीहरुलाई मन पराउथे होला ।
 धेरै हेण्डसम हुनुहुन्छ। कत्तिको आयो कलेजमा पढ्दा लभलेटर ?
हामी पढ्दाखेरी कक्षा १० मा एक जना मात्र केटी थिई, कसले लेख्नु लभलेटर, त्यो बेलामा महिलाहरु पढाउने जमाना नै थिएनन । लाजले कतिपय घरबाट जादैन थिए । त्यस्तो थाहा थिएन ।
 आमा र श्रीमतिमध्ये एक जनालाई रोज्दा…
सबैभन्दा पहिला मलाई जन्म दिने आमा नै रोज्छु, त्यसपछि मेरो जीवनयापन गर्ने जीवन साथीलाई नै रोज्छु ।
 तपाई हिड्दै गर्दा बाटोमा ५ केजी सुन भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ नि ?
यो एक त असम्भव कुरा भयो, दोस्रो कुरा भेटिहालेछ भने पनि म गरिब, असहाय, अनाथ बालबालिकाको हितको लागि कोषमा जम्मा गर्ने थिए“ होला जस्तो लाग्छ ।
 राज्यले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाईदियो भने तपाईको पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ ?
राज्यले मलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाई दिएको भए म आफै गौरवान्वित हुन्थे “ । यो देशमा चलेका शिक्षा नीति छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर व्यवसायमूलक शिक्षा नीति देशैभरी चलाउने थिए“ ।
 भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोन झुक्किएर तपाईको मोबाइलमा आएमा के भन्नु हुन्छ ?
उहाँ ठूलो राष्ट्रको मन्त्रि भएकोले सबैभन्दा पहिले नमस्कार गर्थें, त्यसपछि म उहाहरुसँग हाम्रो देशलाई परेको पिरमर्काको बारेमा एक÷दुई वटा कुराहरु अवश्य नै राख्थें होला ।
 मनपर्ने खाना…
सामान्य दाल, भात, तरकारी, साग, रोटी मन पर्छ ।
 मन पर्ने कपडा…
सर्ट, पाइन्ट, र कोट मन पर्छ । टाई लगाउदिन ।
 मनपर्ने संगीत…
नेपाली संस्कृतिमा आधारित स्थानीय लोक गीतहरु मलाई असाध्यै सुन्न मन पर्ने, पहिलाका सोरठीहरु मन पर्छ । अहिले इन्टरनेटमा खोजी–खोजी पढ्ने, सुन्ने गर्छु । नाचेको पनि हेर्ने गर्छु ।
 सेक्सप्रतिको तपाईको धारणा के छ ?
सेक्स भनेको नेचुरली कुरा हो । हामीले खाना खाएजस्तै अनिवार्य नभई नहुने एउटा प्रक्रिया हो । यसलाई अनौठो मान्नु भएन ।
 नेपालमा सेक्स स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा कि विपक्षमा ।
हामी हरेक कुराले पछाडी परिरहेका छौं । समयको मागले २०÷२५ वर्ष पछि त यो अवश्यनै स्वतन्त्र हुन्छ । तर हाम्रो सामाजिक संस्कारअनुसार म विपक्षमा नै छु ।
 जिन्दगीमा सबैभन्दा मजा के गर्दा आउछ ?
जिन्दगीमा आफूले गरेको काम सफल भएमा यो भन्दा आनन्द अरु केही पनि छैन ।
 जिन्दगीमा भुल्नै नसकेको क्षणलाई सम्झिंदा…
पारिवारीय समस्याहरु उताडचडापहरु धेरै भए । सबैको त्यो हुन्छ नै भएर नै आ आफनो अवस्थामा आई पुगिन्छ । अहिले मेरो यादमा आए अनुसार निजामति कर्मचारीमा अस्थाई रुपमा राप्ती प्रोजेक्टमा जागिर खादा थाई हुने भनेर लोकसेवा खुलेको थियो । त्यो लोकसेवा खुल्दा खेरी हामी जनजातिका हिसाबले हो या अरु कुनै हिसाबले हो । हामीलाई पन्छयाउने काम भयो । सकेसम्म निवेदन नलिने थाई हुने मन छ भने १५ हजार रुपैया बुझाउनु पर्छ । भनेर दलालहरुले हाकिमको दलालले मागेको थियो । त्यो नै मेरो लागि दुखत दिन थियो । कनि भने त्यो १५ हजार रुपैया उसलाई दिएको भए म डुबथे होला अथवा म जागिरमा हल्ली रहन्थे होला । मैले के सोच गरे भने १५ हजारमा फल्स १५ हजार गरे भने कुनै व्यवसाय अथवा उद्योग खोल्न सक्छु चलाउन सक्छु म मेरो खुटामा उभिन सक्छु भन्ने सोच बनाएर घर फर्किए सबैभन्दा नराम्रो क्षण त्यहि हो
 कहिलेकाँही यो व्यापार व्यवसायतिर किन लागिएछ जस्तो लाग्दैन ?
एकदमै मलाई लाग्दैन किनभने म आफै सन्तुष्टी छु, आफै कन्फिडेन्ट छु । र अध्ययन, अनुभव भएको आधारले आफूलाई २÷४ पैसा कमाउने पनि भयो । १५÷२० जनाको लागि मेरा मातहतमा मेरो उद्योगमा रोजगार पनि सृजना भएको छ । उहाँहरु पनि सन्तुष्ट भएकोले म पनि सन्तुष्ट छु यो पेशामा ।
 मरेर भुत भएपछि कस्लाई तर्साउनु हुन्छ ?
हा…हा…हा… मरेर भुत भयो भने अनौठो कुरा हो । यो भौतिकवादमा असम्भव कुरा हो, यस्तो अहिलेसम्म संसारमा रेकर्ड नै छैन